ဂျပန့်အလှဆုံးရဲတိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ တစ္ဆေ !!! - JAPO Japanese News
လာ 21 Sep 2020, 15:59 ညနေ
ဆာမူရိုင်းခေတ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းရဲတိုက်များစွာရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အတော်များများဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေအတွက်လောက်သာ ကျန်ကြွင်းပါတယ်။
ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာ၊ အလှဆုံးပဲလို့ပြောနေကြတာက Hyogo စီရင်စုမှာရှိတဲ့ Himeji ရဲတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
1500 ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်ထားခဲ့ပြီး ပြန်ပြီးချဲ့ထွင်ကာ 1617 ခုနှစ်မှာ လက်ရှိပုံစံဖြစ်လာတဲ့ဒီရဲတိုက်ဟာ အဖြူရောင် heron ငှက်တစ်မျိုးရဲ့ပုံစံကို မြင်ရတယ်လို့ပြောကြတဲ့အတွက် သီးခြားနာမည် 白鷺城（しらさぎじょう）Shirasagi Castle လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
မြေနာမည်ဖြစ်တဲ့ Himeji ရဲ့ Hime ဆိုတာက မင်းသမီးလို့အဓိပ္ပါယ်လည်းရပြီး၊ လှပတဲ့ရဲတိုက်နဲ့ထိုနာမည်ကတွဲမိကာ ကြော့ရှင်းပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ရဲတိုက်ပဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မှတ်ယူကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအများအပြားရှိပါတယ်.
သို့သော် ဒီနေရာမှာတော့ “ Osakabe Hime” ဆိုတဲ့တစ္ဆေက နေထိုင်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Himeji ရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်ထားတာဟာ 姫山 Himeyama လို့ခေါ်တဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Himeyama မှာအရင်က 刑部神社（おさかべ　じんじゃ）Osakabe Jinja ဆိုတဲ့နတ်ကွန်းရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနတ်ကွန်းမှာ ဘာကိုဘုရားအနေနဲ့ကိုးကွယ်ခဲ့သလဲ,ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာရှိလဲ၊ နောက်ပြီး 姫山 Himeyama ရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုတာ ရေရေရာရာ တိတိကျကျ မသိပါဘူး။
ဒီ 刑部神社 Osakabe နတ်ကွန်းဟာ Himeji ရဲတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်..
အဲ့ဒီနောက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်အတွင်းအလုပ်သမားဟာ ရဲတိုက်အတွင်းအမျိုးသမီးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးနေရာဟာ အမျိုးသားတွေပဲရှိတဲ့အလုပ်ခွင်ပါ။ အမျိုးသမီးလက်မခံတာသဘာဝပါပဲ…
နောက်ပြီး ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ညသန်းခေါင်ယံ ဆောက်လုပ်စဲရဲတိုက်ထဲမှာ အလင်းရောင်တွေထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ မျက်မြင်သက်သေအများလည်းထွက်လာပါတယ်။
1611 ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါ Himeji ရဲတိုက်အဆောက်အဦးဆက်လက်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ပိုင်ရှင်ဟာ နေမကောင်းဖြစ်ပြီး လဲကျသွားပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ ရဲတိုက်အတွက်အလုပ်လုပ်နေသူတွေရဲ့ကြားမှာ 刑部神社 Osakabe နတ်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျိန်စာပဲမဟုတ်လားဆိုတဲ့ စကားတွေ ပြန့်သွားပါတယ်။
ကောလဟာလတွေပြန့်သွားတဲ့အခါ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်မယ့်သူတွေတောင်မရှိတော့တဲ့အတွက် ရဲတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့အစေခံတွေဟာ ဝါရင့်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကိုပင့်ပြီး ပရိတ်တွေရွတ်ကာဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန် ပရိတ်ရွတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာ ဝတ်စားဆင်ယင်ထားတဲ့ ခပ်ငယ်ငယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ်လာပါတယ်။
“ ပရိတ်ရွတ်နေတာရပ်လိုက်….!! “
ဘုန်းတော်ကြီးဟာသူမပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ ထိုအမျိုးသမီး ရုတ်တရက်စိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းသွားပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီးကိုသေစေတဲ့အထိရန်ပြုပြီးနောက် ထိုအမျိုးသမီးထွက်သွားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒါကတော့ “ Osakabe မင်းသမီး” လို့ပြောနေကြတဲ့ တစ္ဆေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျိန်စာကိုကြောက်တဲ့ရဲတိုက်ပိုင်ရှင်ဟာ ရဲတိုက်တွင်းမှာပဲ 刑部神社 Osakabe နတ်ကွန်းကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနတ်ကွန်းကို Himeji ရဲတိုက်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးအထပ်မှာ ထားလျှက်ရှိပြီး ယခုအချိန်ထိလည်းကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ် ၎င်းရဲ့လှပမှုကြောင့်နာမည်ကြီး Himeji ရဲတိုက်ကို စစ်မရှိတဲ့ရဲတိုက် လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
ရဲတိုက်ဆောက်လုပ်စဥ်ကပင် လက်ရှိအချိန်ထိ ကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲတွင်းကျရောက်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး..
အမေရိကန်နဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် တစ်မြို့လုံးမီးလောင်းသွားခဲ့ပေမဲ့ Himeji ရဲတိုက်ဟာ အပျက်အဆီးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ရပါဘူး..
အဲ့ဒီအချိန်ကအချို့သောမြို့တွေမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေ လေကြောင်းစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားပေမဲ့ Himeji ရဲတိုက် မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး..
Osakabe မင်းသမီးက ရဲတိုက်ကိုစောင့်ရှောက်နေတာကြောင့်များလားတော့မသိပါဘူး ..
တိုင်းပြည်ရဲ့ရတနာလိုဖြစ်တဲ့ ဒီလှပတဲ့ရဲတိုက်ကို သေချာပေါက်စာဖတ်သူတို့အားလုံးကို မြင်စေချင်မိပါတယ်။
နောက်ပြီး အပေါ်ဆုံးအထပ်မှာရှိတဲ့ Osakabe နတ်ကွန်းဆီသွားနိုင်မယ်သာဆို Osakabe မင်းသမီးကိုလည်း နှုတ်ခွန်းဆက်နိုင်မလားတော့ မသိဘူးနော် ?
ဂျပန်စူပါမားကတ်တို့ရဲ့ ဈေးဗန်းခင်းနည်း !!!!!